एजेन्सी । सोमबार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको बंगला विमान दुर्घटना विमानस्थल एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरुम (एटिसी) गलत निर्देशनका कारण भएको बंगला एयरलाइन्सले बताएको छ।
बंगला एयरलाइन्सका प्रमुख इमरान असिफले जनाए अनुसार चालक र विमानमा कुनै खराबी नभएको प्रष्ट पर्दै नेपाल स्थित एयर ट्रफिक कन्ट्रोलरको कमजोरीले यो दुर्घटना भएको बताएको हो। उनले भनेका छन्, ‘विमान र चालकमा कुनै खराबी छैन तर त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको एटिसीले दिनपर्ने सही जानकारी नदिएकै कारण यति ठूलो दुर्घटना हुन गएको हो ।’
ढाका स्थित युएस बंगलाको कार्यालयमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।उनले ढाकाबाट सुरक्षीत उडान भरेको विमान र विमान चालकमा कुनै समस्या नभएको बरु काठमाडा स्थीत ट्राफिक कन्ट्रोलबाट नै गलत निर्देशनका दिएका कारण जहाज दुर्घटना हुन पुगेको दाबी समेत गरेका छन् ।
तर, त्रिभुवन विमानस्थलले भने बिमान दुर्घटनामा पाइलटको नै दोष रहेको र टावरको निर्देशन नमानेको यस अघिनै बताईसकेको छ ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन २९, २०७४१५:०४
श्रीदेवीको पार्थिक शरीर आज मुम्बइ ल्याइदै: के कारण ढिलाई भैरहेको छ दुबईमा ?
एकै परिवारका ६ जना मृत अवस्थामा फेला: उनीहरुको साथबाट भेटियो ६ वटा सुसाइड नोट !
उत्तर कोरियालाई अमेरिकाको चेतावनी – आणविक कार्यक्रम नत्यागे नाकाबन्दी लगाइन्छ !
टर्कीमा निर्वाचन आगामी जुनमा २४ मा हुने